Aqoonyahanka Soomaalida oo ka hadlay xiriirka loo jaray Kenya & talo ay soo jeediyeen | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Aqoonyahanka Soomaalida oo ka hadlay xiriirka loo jaray Kenya & talo ay...
Aqoonyahanka Soomaalida oo ka hadlay xiriirka loo jaray Kenya & talo ay soo jeediyeen
(Hadalsame) 20 Dis 2020 – Aqoonyahanka Soomaaliyeeed ayaa ka fal-celiyey sida ay u arkaan xiriirka diblomaasiyadeed ee loo jaray Kenya oo ay ku tilmaameen mid ”deg deg badani ka muuqato”, oo kaliya dhibaataynaysa muwaadiniinta labada dal.
“Waxaanq abaa in go’aanka ay DF xiriirka ugu jartay Kenya uu yahay qar iska tuurnimo iyo deg deg,’’ ayuu yiri Abukar Arman, oo ah Falanqeeye arrimaha Geeska iyo Bariga Dhexe oo waraysi siiyey Anadolu Agency.
Arman ayaa sheegay in dhaqaalayowga labada dal (Kenya iyo Somalia) ay isku xiran yihiin isla markaana ay magaalada Nairobi tahay iridka ay Soomaalidu caalamka ka gasho, isagoo dhanka kale sheegay in arrintani kala xayirayso kumannaan Soomaali ah oo labada dhinac kala jooga, isagoo soo jeediyey diblomaasiyad caqli iyo waaqiciyad ku dhisan xilligan adag ee la marayo.
Hassan Sheikh Ali Nur oo bare ka ah Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa isna rumaysan in xiriirkan la jaray aanu daruuri ahayn.
“Waxay saamaynaysaa Soomaalida caadiga ah ee dawooyinka, waxbarashada iyo ganacsigu uga xirnaayeen Kenya,’’ ayuu u sheegay Wakaaladda Anadolu Agency.
Kenya ayaan dabcan eed la’ayn iyadoo dhowaantan martigelisey MW Maamulka goosad doonka ah ee Somaliland, waxay sidoo kale sheeganaysaa dhul badeed Somalia leedahay, taasoo lagu daray MW Jubbaland oo ay si muuqata daneheeda ugu adeegsato.
“Kenya, sida Ethiopia, waxay faragelin ku haysey siyaasadda iyo amaanka Somalia sir iyo caadba waxayna sidaa ku wiiqayaan danaha qaran ee Somalia,” ayuu ku dooday Arman oo soo jeediyey in haddii xal la doonayo Somalia laga saaro ciidamada Kenya iyo Itoobiya, balse aan xiriir jaris saamayn xun keenaya lagu mashquulin.
Previous articleMa Dastuurka ayaa qaba in ay hay’aadka warbaahintu barnaamijyadooda u fasax qaataan?
Next articleKenya oo si cad u sheegtay inaysan Somalia u aqoonsanayn dal madax bannaan